VaTrump Vanoregerera Vanhu Vakapara Mhosva Vanopfuura Makumi Maviri
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vakazivisa mazita evanhu vanopfuura makumi maviri vavakapa ruregerero pamhosva dzose dzavakapara.
Ukuwo, vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica mutsva, VaJoe Biden, vakashora zvikuru mabatirwo ari kuitwa nyaya yekupinda zvisiri pamutemo kwevavanoti vashandi veRussia vachisora mapazi mazhinji ehurumende ye America, vachiti izvi zvakakonzerwa nekushaya hany'a kwaVaTrump vasingachengetedzi America.
VaBiden vakati vane zvavachaita nenyaya iyi kana vatanga kushanda zviri pamutemo semutungamiri weAmerica mushure mekutoreswa mhiko musi wa 20 Ndira 2021.
Kusvika pari zvino, VaTrump havasi kubvuma kuti vakakundwa musarudzo yemutungamiri weAmerica uye vari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vabvume kuti vakabirwa musarudzo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika, Doctor Rhoderick Machekano, vanoti zviri kuitwa naVaTrump zviri pamutemo, kunyange hazvo vanhu vasingazvifariri.
VaMachekano vanoti bumbiro remitemo yeAmerica rinopa mutungamiri weAmerica masimba akawanda zviri pachena asi kuti vanhu vave kutanga kuona kuti hapana ane simba rekudzora mutungamiri wenyika kana achiita zvimwe zvinhu zvisingaenderani netarisiro yeveruzhinji.